Time Core Messages M10 Grade R X | Wordworks
Umdlalo wokulinganisa, ofana nomdlalo wevenkile okanye wokupheka, yindlela eyonwabisayo yokucinga ukuba kunjani ukuba ngabanye abantu abathatha inxaxheba kwimisebenzi eyahlukileyo. Umdlalo wokulinganisa uyabancedisa abantwana ukuba baqonde ilizwe abahleli kulo kunye nezinto abazibona zisenzeka. Uphinda ubancedise ekubeni babe nomfanekiso ngqondweni wamava ahlukileyo abanokuncokola okanye babhale ngawo.
Abantwana abaselula bayakonwabela kakhulu ukubalisa amabali besebenzisa umdlalo wokulinganisa. Ukudlala ngolu hlobo ke kuyabanceda bacinge futhi baqonde ilizwe abahleli kulo.
Ukubalisa amabali kuphinda kubancede bakwazi ukuphuhlisa imifanekiso-ntelekelelo yabo. Ukudlala ngolu hlobo kukhuthaza abantwana ukuba bazenzele umfanekiso ntelekelelo wamabali abanokuwabalisela abanye abantu ze ekugqibeleni bawabhale.
Umdlalo wokulinganisa wonwabisa ngakumbi ke xa umntwana wakho eneepropu ezihambelana nebali abalilinganisayo. Ukuba umntwana wakho wenza ngathi wenza isuphu, kufuneka asebenzise into enkulu emile okwesangqa, efana nembiza yokupheka isuphu ze asebenzise uluthi enze ngalo icephe lesuphu.
Izinto ezincinci ezifana namagqabi okanye imifanekiso yemifuno zingagalelwa embizeni zizanyiswe ngeli xesha besenza ngathi bayapheka ngokwendlela abenza ngayo abantu abadala emakhaya.